बलिउड Archives - Page2of 13 - Purbeli News
English बलिउड	छोराछोरीलाई बराबर सम्पति बाँड्ने घोषणा गरेका अमिताभसँग यति धेरै सम्पति	बलिउडका ख्यातीप्राप्त अभिनेता अमिताभ बच्चनले लैंगिक समानतालाई बल पुर्याउन आफ्नो सम्पत्तिको आधा भाग छोरी श्वेता नन्दालाई पनि दिने घोषणा गरेका छन्। ७४ वर्षीय सुपरस्टारले आफ्नो ट्विटर अकाउन्टमा यसको घोषणा गर्दै लेखेका छन्, ‘हामी समान हौं...लैगिक समानता।’उनले आफ्नो निधनपछि आफ्नो सम्पत्तिमा छोरा अभिषेक र छोरी स्वेताको बराबरी भाग लाग्ने बताए।
लैगिक समान...	रेखाले लगाएर हिड्ने सिन्दुर सञ्जय दत्त नामको, यस्तो रहेछ भित्री रहस्य	बलिउडकी चर्चित नायिका रेखाको जीवनमा आधारित यासीर उस्मानद्वारा लिखित किताब दअनटोल्ड स्टोरी बजारमा आएको छ । अनटोल्ड स्टोरीबाट रेखाका थुप्रै अनटोल्ड स्टोरी बाहिर आएपछि बलिउडका रेखालाई लिएर हँगामा मच्चिएको छ । उनले सधैँ लगाएर हिँड्ने सिन्दुरको रहस्य पर्दाफास भएपछि विभिन्न समाचारहरुले भारतिय मिडिया तताएको छ ।
किताबमा लेखिएको छ, ‘जब अमिताभ रेखादेखि टाढा...	करीनाले यस्तो राखिन् आफ्नो छोराको नयाँ नाम !	करीना कपुर र सैफ अली खानको छोराको नामले धेरै चर्चा पाइरहेको छ। उनीहरुको छोराको नाम तैमुर अली खान राखेपछि यो नाममा निकै विवाद पनि भएको थियो। टर्कीका एक शासकको नाम तिमुर भएको र उनको छोराको नाम तैमुर उस्तै सुनिने भएकाले यसबारे निकै चर्चा भएको थियो।
यी सब कुराले आफूलाई असर नगरेको करीना र सैफले बताएपनि उनीहरुले आफ्नो छोराको नयाँ नाम राखेका छन्। उनीहर...	ऐश्वर्या राय र अभिषेक वच्चनबिच छोरीका कारण यसरी बल्यो झगडाको आगो	चर्चित बलिउडका जोडी अभिषेक–ऐश्वर्याबीच छोरी आराध्याको करिअरको विषयलाई लिएर विवाद सुरु भएको बताइएको छ । यि दुईविच छोरीको करिअरलाई लिएर फरक फरक सोँच राखेका कारण झगडा भएको बताइन्छ ।
अभिषेक आफ्नी छोरी आराध्यालाई बालकलाकारको रुपमा परिचित गराई भविष्यमा पनि अभिनेत्री बनुन र फिल्म उद्योगमा नाम कमाउन भन्ने चाहान्छन् तर उता ऐश्वर्या भने आराध्या फिल्मी उद्यो...	बलिउडकी नायिका अालिया भट्टलार्इ कस्ले दियाे ज्यान मार्ने धम्की : ५० लाख फिराैती माग	एजेन्सी / छाेटाे समयमै बलिउडमा एक छत्र कायम गर्न सफल कान्छि नायिका अालिया भट्टलार्इ एकाएक ज्यान मार्ने धम्की सहित ५० लाख फिराैती मागिएकाे छ । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार महेस भट्ट र उनका परिवारलार्इनै ५० लाख माग्दै ज्यान मार्ने धम्कि अाएकाे हाे ।
भारतकाे उत्तरप्रदेशबाट बारम्बार महेस भट्टकाे माेबाइलमा मेसेज अाउन थालेपछि प्रहरी सरणमा पुगेकाे थ...	२५ वर्षको उमेरमा अजयसँग काजोलले विवाह गर्नुको कारण यस्तो रहेछ !	एजेन्सी। बलिउड अभिनेत्री काजोल तथा अभिनेता अजय देवगन विवाह वन्धनमा बाँधिएको यस वर्ष १८ वर्ष पूरा भएको छ। विवाह वार्षिकीमा काजोलले अजयसँगको एक सेल्फि पोस्ट गर्दै विवाह वार्षिकीको शुभकामना दिने सबैलाई धन्यवाद दिइन्। काजोलले २५ वर्षको उमेरमा अजयसँग प्रेम विवाह गरेकी हुन्। काजोल आफ्नो करियर उच्चतम लयमा चलिरहेको बेलामा विवाह गरेकी थिइन्।
उनले सो समयमा ...	चर्चित बलिउड अभिनेत्री एश्वर्या चलाउँदिनन् फेसबुक/ट्वीटर किन ? कारण यसताे पाे रहेछ !	एजेन्सी । बलिउड अभिनेत्री एेश्वर्य राय बच्चन खासै सामाजिक सञ्जालहरुमा देखिन्नन् । आजको सामाजिक सञ्जालको दुनियामा किन उनी यसबाट टाढा रहेकी छन् त ? यसको कारण भनेको उनका पति अभिशेक हुन ।भारतीय समाचारमाध्यले उल्लेख गेरअनुसार उनी सामाजिक संजालमा आउन चाहे पनि सकेकी छैनन् ।
उनलाई पति अभिषेक बच्चनले रोकेको खबर सार्वजनिक भएको छ । यता, अभिषेक भने सामाजिक सं...	शाहरुखको नयाँ फिल्मको नाम परिवर्तन, के राखियो?	एजेन्सी। यस वर्ष ‘रइस’ मार्फत् दर्शकमाझ उत्रेका शाहरुख खान आगामी वर्ष अनुष्का शर्मासँग इम्तियाज अलिको फिल्ममा देखा पर्नेछन्। अनुष्कासँगको यो फिल्मको रिलीज मिति सलमान खानले ट्वीटरमार्फत् घोषणा गरिदिएका थिए। अगस्ट ११ मा रिलीज हुने भनिएको यो फिल्मको नाम सुरुमा ‘द रिङ’ हुने भनिएकोमा अहिले परिवर्तन गरिएको छ। भारतीय समाचारमाध्यमका अनुसार शाहरुखको यो फि...	६ कुकुरको हमलामा पर्दा यसरी घाइते भइन् बलिउड हिरोइन	एजेन्सी। बलिउड तथा दक्षिण भारतिय फिल्मकी अभिनेत्री पारूल यादव कुकुरहरूको आक्रमणमा परेकी छन्। उनलाई ६ वटा भुस्याहा कुकुरले एकै पटक डरलाग्दो आक्रमण गरेका थिए। सो घटना सिसिटिभीमा कैद भएको छ। उनलाई मुम्बई स्थित आफ्नै घर वरीपरी आफ्नो पाल्तु कुकुरसँग घुमिरहेको अवस्थामा भूस्याहा कुकुरहरूले आक्रमण गरेका थिए। कुकुरहरूले ३४ वर्षे पारूललाई आक्रमण गर्दै भूईं...	‘अमिताभ र जया सँगै नबस्नु कारण यस्तो रहेछ	एजेन्सी। बलिउड हस्ती अमिताभ बच्चन दम्पती सँगै नबस्ने खुलासा भएको छ। भारतीय समाजवादी पार्टीका नेता अमर सिंहले एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा बच्चन परिवारबारे खुलासा गरेको भारतीय मिडियाहरूले जनाएका छन्। एक अन्तर्वार्तामा नेता सिंहले बुहारी ऐश्वर्या राय बच्चनसँगको सम्बन्धलाई लिएर उनीहरू अलग भएको दाबी गरेका छन्।
राजनीतिक नेता अमर सिंह कुनै समयमा मेगास्ट...	‹१२३४›»
भर्खरै	प्रधानन्यायाधिश सुशीला कार्कीविरूद्ध महाअभियाेग प्रस्ताव दर्ता : लाग्याे गम्भिर अाराेप
नेपालमै बसेर युट्युबबाट डलर कसरी कमाउने ? यस्ताे छ तरिका (भिडियाे सहित )